Hor: Hel Aragti Wadaag ah Isgaadhsiinta Iibintaada | Martech Zone
Front waa madal isgaarsiinta macaamiisha oo isku darsata emayllada, barnaamijyada, iyo asxaabta isla aragtida keliya. Marka loo eego Front, way u fududahay qof kasta oo shirkaddaada ka mid ah inuu saameyn ku yeesho khibrada macaamiisha.
Front waxay jeceshahay inay nafteeda ka fikirto qolka isgaarsiinta ee kooxaha iibka. Iyada oo dhammaan kanaalladaada fidinta ay u wada muuqan karaan kooxdaada oo dhan hal daaqad oo ay weheliyaan CRM-kaaga iyo nidaamyada gadaal, Front waxay kaa caawineysaa inaad xirxirto wax badan, dhakhso badan, taasoo u saamaxaysa kooxdaada iibka:
Samee socodka shaqada otomaatig ah leh digniino caqli-gal ah si loo kala saaro jihooyinka soo galaya, loo maro qofka saxda ah, loona kala hormariyo wacyigalinta.
Iskaashi dhanka isgaarsiinta ah waqtiga dhabta ah oo tusaalee fariimahaaga wax ku oolka ah. Si dhakhso leh isula jaangooyo istiraatiijiyad leh macno buuxa.
Ka warbixi dhaqdhaqaaqa iibka iyo waqtiga jawaabta si aad u hesho fikradaha aad u baahan tahay inaad horumariso. U xilsaar milkiileyaasha in ay maareeyaan rajo kasta min dhamaadka ilaa dhammaad.
Isdhex galka Iibinta (ama CRM kasta) sanduuqaaga dhexdiisa oo loogu talagalay macnaha guud ee farahaaga. Kudar iskudhafka caadada ah API-yada furan ee Front.
Astaamaha Muhiimka ah ee Hore
Sanduuqa Kooxda - Front waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku kala soocdo sanduuqyada kooxdaada iibka adigoo adeegsanaya kanaal, tier, joqraafiyad, deg deg ah - si kastaba ha noqotee, waxaad abaabushaa rajadaada, Front way sameyn kartaa.
Jawaabaha qasacadaysan - Si joogto ah cagahaaga ugu fiican horay ugu sii qaado sheybaarada emaylka ee aad u habeysan oo la hagaajin karo oo loogu talagalay heerka jawaabaha sare.
Qabyo wadaag - Qabyo isla markaana wax ka beddel emaylka si wada jir ah waqtiga-dhabta ah si aad u dhammaystirto wacyigalintaada oo aad uga fogaato jahwareerka dib-u-soo-baxa ee qabyada ah.
hadlayay - Si dhakhso leh ula hadal kooxdaada macnaha guud ee iimayl kasta oo rajo leh si aad ula jaanqaaddid istiraatiijiyaddaada intaadan gaadhin.
Fadlan - Ku ekaw diiradda saar heshiisyadaada qiimaha-sare halka aanad waligaa kubbada kudaadin dabagal.
Helitaanka CRM - U gal CRM-gaaga midig fariinta kasta.
Codso Demo Horudhac ah
Tags: falanqaynta emaylkameelaynta emaylkafaallooyinka emaylkafrontappemail la wadaagokoontada emailka la wadaagosanduuqa la wadaago